I-Les Ecuries, i-gite ebalaseleyo yabakhubazekileyo
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguTrevor
I-Les Ecuries e-Le Bouchet ihlala kwindawo entle enemithi kuphela imizuzu emi-5 ukusuka e-Descartes enevenkile ezinkulu, iivenkile zokutyela, iibhari kunye neevenkile. I-gite inobuhlobo bokukhubazeka kwaye ineendawo zayo zokuhlala. Iqula elishushu ekwabelwana ngalo libekwe kwiigadi ezintle ezibonelela ngendawo ezolileyo nenoxolo ukuze uphumle kwaye ukonwabele ukuhlala kwakho-ufike nje, beka phantsi iibhegi zakho, vula ibhotile ebandayo yeVouvray, tsala indawo yokuphumla, phefumla kwaye ukhululeke. kwiholide yakho!
Siyazi ukuba ibaluleke kangakanani indawo ekufumaneni okona kulungileyo kwiholide yakho, yiyo loo nto siyazi ukuba uya kukonwabela ukuhlala kwakho nathi e-Le Bouchet kwaye yiyo loo nto sineendawo ezimbini zokuhlala e-Le Bouchet, nganye ineendawo zayo ezizimeleyo. qiniseka ukuba unexesha elinoxolo kunye nelokuphumla kangangoko kunokwenzeka. Indawo yegites iyenza igqibelele ekuboneni uninzi lweLoire chateaux kodwa kukwakho nezinye izinto ezininzi onokuzibona kwaye uzenze ngakumbi emazantsi, ekuhlaleni naseVienne.
Ummandla walapha uyindawo etyebileyo yezilwanyana zasendle, kukho amaxhama abomvu neehagu zasendle ezizulazulayo kunye namaxhalanga ekhala njengoko ejikeleza phezulu; oonokhwalimanzi kunye neendidi ezininzi ezahlukeneyo zeentaka zasendle zidla ngokubonwa kwichibi lendawo kunye nakwindawo ezingqongileyo.
Sizamile ukwandisa okusingqongileyo kwiigadi zaseLe Bouchet ezibekwe umhlaba kakhulu kwaye zityalwe ukutsala izilwanyana zasendle ngelixa kwangaxeshanye zikubonelela ngezinto ozifunayo ukuze ukonwabele iholide yakho, idama elikhulu elishushu elinendawo yalo apho gcina iliso kubantwana abancinci, indawo yepikiniki ejongene ne-pool kunye nendawo yokudlala kunye ne-swing, i-slide, isakhelo sokunyuka kunye neenjongo zomdlalo webhola.
Iigites zethu ezimbini ziye zahlaziywa kumgangatho ophezulu kakhulu zibonelela ngazo zonke iindawo eziyimfuneko ozidingayo ukuze ufumane okuninzi kwiholide yakho.
1 ibhedi elala abantu ababini, 1 iisofa eziyi-, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
Siphakathi kwezona ndawo zinomtsalane kubakhenkethi ezinokubonelelwa yiFrance kwaye sicebisa kakhulu oku kulandelayo:
IIANGLES SUR L'ANGLIN
Ukuhamba nje kwemizuzu engama-25 ukusuka eLe Bouchet kulandela imbonakalo entle yemoto ecaleni komlambo iGartempe ikuzisa eAngles-sur-l'Anglin. Ifumana igama layo kwii-Angles, isizwe samaSaxon esahlasela iNgilani ngenkulungwane yesihlanu. I-Angles-sur-l'Anglin idweliswe njengenye ye "Les Plus Beaux Villages de France" kwaye kulula ukubona ukuba kutheni. Intle kakhulu, imi kumlambo iAnglin owahlula ilali kubini. Kukho indawo ephezulu yelali enentsalela yeenqaba zakudala kunye nendawo esezantsi yelali eneyona mbono intle yesingqusho samanzi onokuthi usibone. Thatha ikhamera yakho!
Ibekwe njengeNombolo 1 yogcino-zilwanyana eFransi kwaye njengenye yezona paki zezilwanyana zintle ehlabathini, iZooParc de Beauval likhaya lezona zilwanyana zininzi eFransi ezinezilwanyana eziphantse zibe ngama-6,000 kuquka iipanda ezimbini ezinkulu, ezingafumanekiyo kwenye indawo eFransi!
I-BRENNE National Park
Ngamachibi angaphezu kwewaka, iBrenne yenye yezona ndawo zibalulekileyo zokufuya iintlanzi eFransi. IPaki ngokwayo yadalwa ngo-1989 ukuze igcine eli lifa lemveli likhethekileyo "lendalo", kodwa eneneni lenziwe ngumntu, amachibi okuqala enziwa ziimonki kumaxesha aphakathi! Indawo eyoyikekayo yokubukela iintaka, iBrenne ikwalikhaya kuluhlu olutyebileyo lwezityalo, iintlobo ezininzi zezinambuzane kunye nohlabamanzi abamangalisayo kunye neyona ndawo ibalulekileyo yaseFransi yabemi basePond Pond yaseYurophu. Kukho ngaphezu kwe-100 yohambo oluphawulweyo olususela kwi-6 ukuya kwi-32km olunokulandelwa kwiimephu ezifumaneka kwii-ofisi zabakhenkethi basekuhlaleni kwaye kukho izikhumba ezivulekele uluntu kunye nohambo olukhokelwayo kunye nokhenketho kubandakanya nabanye abakhokeli abathetha isiNgesi. Kukho iisekethe eziphawulweyo ezilishumi elinanye zokukhwela ibhayisikile enokuba yindlela entle yokubona iBrenne eneendlela ezithe tyaba kunye netrafikhi encinci kakhulu. Ukukhwela ihashe kunye nokuhamba ngephenyane kukwakhona.
Ukujonga ilali entsha esezantsi, isixeko esidala esibiyelwe ngodonga saseChauvigny eneneni sineenqaba ezintlanu ezidilikileyo ezihleli phezu kwelitye lesikhumbuzo elilikhaya leGeants du Ciel (Iingxilimbela zeSibhakabhaka) enye yeentaka ezilungileyo kakhulu ebonisa ukuba unokubakho. ukuza ngapha.
Kunye nokuba neevenkile ezininzi, iikhefi kunye neendawo zokutyela, iDescartes nayo inemakethi enkulu yakusasa ngeCawa. Imakethi yingqokelela ye-eclectic yee-allsorts ukusuka kwiivenkile zokutya kwaselwandle ukuya kukulungiswa koomatshini bokuthunga! Kufuphi e-Ethni'Cité kukho imiqolomba ye-troglodyte ebekwe kumawa aphezulu ngaphezu komlambo iCreuse - eyadalwa ngeNkulungwane ye-12 nguRichard the Lionheart ukuba asebenze njengomlindi phezu kweentshaba zakhe (amaFrentshi !!). Ifumaneka kumlambo iCreuse, iDescartes inepaki enkulu yokuzonwabisa enikezela ngeKayaking, igalufa encinci, intenetya, indawo yokudlala yabantwana kunye nequla elikhulu lokuqubha elishushu elinezilayidi kunye nejacuzzi zonke ezibekwe kwiigadi ezintle ezazikade zivalelwe indawo yokuhlambela enqatyisiweyo. .
Ngokulula nje, i-Futuroscope imnandi kwaye iyonwabisa kakhulu usapho lonke nokuba yeyiphi iminyaka kwaye nokuba zithini na izimvo zakho malunga nepaki yomxholo. Isekwe ngokuyintloko kumxholo womfanekiso oshukumayo, ipaki inezitsalane ezingaphezulu kwamashumi amabini anesihlanu kwaye ibonisa ukuba iindwendwe zithatha uhambo olumangalisayo kwihlabathi elitsha, amava e-3D kunye ne-adventure edibeneyo. Ngokuhlwa nasebusuku ipaki iphila ngokubona kunye nezandi zemibukiso yokukhanya kwezobugcisa. Lusuku oluhle kakhulu kwaye njengoko kukumgama wemizuzu engama-30 kuphela ukusuka kwindawo yethu.
Ekuqaleni iHaute Touche yayiyifama kunye nepaki ye-chateau e-Azay-le-Ferron kwaye ngoku iyipaki yezilwanyana zasendle njengenye. Ufika emnyango kwaye uthathe uhambo olucothayo lwe-safari ujikeleze ipaki ukufumana ukujonga ezinye zezilwanyana ezisendleleni enamathuba amaninzi efoto.Ukufika kumbindi weParc emva koko unokwenza ipikniki okanye utye kwindawo yokutyela ngaphambili. ukuhlola i-parc ngeenyawo okanye ngebhayisekile ukusondela kwaye ubuqu kakhulu kunye nezilwanyana zasendle.Inxalenye yehlathi elikhulu leehektare ezingama-500 eBrenne, iHaute Touche inezilwanyana ezivela kumazwekazi amahlanu. Ngenene sicebisa undwendwelo.
Idolophu yakudala yaseLoches ihleli phezu kwenduli ejonge iLoches entsha kunye noMlambo i-Indre. IChateau eyaziwa ngokuba yiRoyal Apartments sesinye sezakhiwo ezithathu ezimangalisayo ezidala ezibandakanya iCawe yaseCollegiate kunye neDungeon egcinwe kakuhle yaseYurophu engeyiyo, njengoko ubunokulindela phantsi komhlaba kodwa eneneni ikwiimitha ezingamashumi amathathu anesithandathu ukuphakama! I-Loches yindawo ethandekayo yokuhambahamba kwaye ukhangele kwiivenkile ezincinci kwaye undwendwele imarike ngolwesiThathu nangoMgqibelo ekuseni ngaphambi kokuba uzinze kwisikwere sedolophu kunye nekofu kwaye ubukele ihlabathi lihamba.
Kukho ii-chateaux ezingaphezu kwamashumi amathandathu ezisasazeke ngaphaya kwentlambo yaseLoire kwimimandla emithathu yakudala yaseTouraine, Anjou kunye ne-Orléanais kwaye ummandla weTouraine likhaya lezona zinkulu kunye nezona zaziwa kakhulu kubandakanya iChenonceau, iVillandry kunye ne-Ussé, impembelelo yoqobo. inqaba kwi-fairytale of Sleeping Beauty. Kodwa ngaphezu kwamashumi amathandathu e-Loire Chateaux onokukhetha kuyo uthatha isigqibo sokundwendwela? Ii-chateaux eTouraine zonke zifikelelwa ngokulula kwisithuba seeyure zokuqhuba ukusuka eLe Bouchet. Kukho amatye anqabileyo-ezo chateaux ezinikezela ngaphezu kwembali-mhlawumbi izitiya zokuhambahamba, ilali entle yekofu kwaye ubukele umhlaba udlula okanye iivenkile kunye neemarike ukukhangela. Esizithandayo yiLoches kunye nomhadi wayo kunye ne-chateau ebekwe kwidolophu ephakathi kunye neevenkile kunye neeresityu; Indawo yokuhlala enegadi ezikhethekileyo; IAzay-le-Rideau engumfanekiso ogqibeleleyo kwaye uClos Lucé ulikhaya likaLeonardo da Vinci. Ngokuqinisekileyo zininzi ezinye ii-chateaux, ezininzi ezifikeleleka ngokulula, kwaye hayi kwiNtlambo yaseLoire kuphela.
Zininzi, iindawo zokutyela ezininzi ezisuka kwisitayile kunye nexabiso onokukhetha kuzo, ukusuka kwindawo yokutyela yaseMichelin eneenkwenkwezi "La Promenade" ePetit Pressigny ukuya kwindawo encinci kodwa emnandi kakhulu, iAssiette Creuse, eDescartes kunye nalo lonke uhlobo oluphakathi - malunga neLe Bouchet uya kufumana into kumntu wonke.
Kuthe qelele kukho indawo yokutyela yokutya kwaselwandle emnandi kwilali yasePouzay, eLe Gardon Frit. I-gite yethu inoluhlu lweendawo zokutyela zasekuhlaleni ezinezibonakaliso zamaxabiso kwaye ngokuqinisekileyo sihlala sonwabile ukubhukishela itafile.
I-ST CYR LAKE
Kuphela yimizuzu engamashumi amathathu ukusuka kwindawo yethu eLe Bouchet lelona chibi limangalisayo eSt Cyr. Ngolwandle lwayo olunesanti kunye namanzi acocekileyo acocekileyo yenza indawo efanelekileyo yokuchitha usuku nje uzipholele kwaye uphumle okanye udlala nabantwana elunxwemeni. Ukuba ufuna ukusebenza kancinci ungaqesha enye yeepedallos okanye kayaks. Le paki inamaphenyane, ukusefa umoya, ukuhamba ngesikhephe, ukuloba (akukho layisensi ifunekayo), igalufa kunye nebala kunye neputt. Kukwakho nesnack bar ecaleni kwechibi leziselo; ice cream kunye nokutya.
Isixeko esinomdla, esiphithizelayo esaziwa njengekomkhulu lesibini laseFransi (enyanisweni kwelinye inqanaba sasinjalo) sidibanisa amakhulu eminyaka yembali, kunye ne-gallo roman isala kwizakhiwo ezigcinwe kakuhle zamaxesha aphakathi ecaleni koyilo olutsha lwangoku. Thatha uloliwe wabakhenkethi ukuze ubone iindawo ezininzi zoKhenketho kubandakanya ikota yakudala yasePlumereau kunye neCathedral yaseSaint Gatien entle. Kukwakho ithuba lokuthatha uhambo ngesikhephe ecaleni koMlambo iLoire kwaye ubone iLoire Chateaux ukusuka ngasemlanjeni.
Iwayini ngokuqinisekileyo ibalaselisa kakhulu kwiTouraine, eneebomvu ezithambileyo kunye newayini ezimhlophe qhwa kunye newayini yeVouvray emnandi kakhulu! Ngemiqolomba yaseTufa ecaleni kweLoire efanelekileyo yokugcina iwayini kukho iikhenkethi ezininzi ezahlukeneyo zewayini (ezininzi ngesiNgesi) ezilungiselelwe ukunika ithuba lokusampula iglasi okanye ezimbini.
Nokuba luncedo ukubhukisha indawo yokutyela yasekuhlaleni okanye iingcebiso malunga nomtsalane wabakhenkethi basekhaya, sihlala sonwabile ukunceda.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Abilly